Vaovao - Torohevitra 5 hanombohana fomba fiaina maharitra
Miaraka amin'ireo olana toy ny fitantanana ny fako sy ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny izay lohalaharana amin'ny lahateny, dia mitady fomba hamihina sy hampirisihana fomba fiaina maharitra kokoa isika izao. Ary amin'ny fanaovana izany dia mila mihetsika haingana isika. Fa maninona Antony iray lehibe dia satria nanjary mazava fa sivy isan-jaton'ny plastika rehetra vita hatramin'ny 1950 dia azo namboarina indray. Hatramin'izay dia namokatra plastika 8,3 miliara metritra taonina ny zanak'olombelona. Ary ny fieritreretana fa 747 tapitrisa monja amin'ireo 8.3 miliara taonina metrika no naverina simba tao anatin'ny 6 taona lasa izay dia mampatahotra. Ankoatr'izay, ny famoahana entona entona entona manerantany dia nisondrotra tao anatin'ny telo taona lasa, nahatratra avo indrindra ny taon-dasa tamin'ny tombatombana 36,8 miliara taonina. Ity fiakarana avoakan'ny entona ity dia azo avy amin'ny fampiasana hatrany ny solika fôsily, ny famongorana ala sy ny antony maro hafa.
Ka manoloana ireo fiakaran'ny tontolo iainana mihabe, ahoana no ahafahantsika mamadika ny onja? Ireto ambany ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fihazonana fomba fiaina maharitra.
Ahena ny fampiasana angovo ao an-trano
Mety ho toa hadalana izany, fa ny fampihenana ny angovo mety hampihena ny entona entona ary ny atmosfera madio kokoa. Fomba iray hampihena ny fampiasanao ny herin'ny ankohonanao ny famonoana fotsiny ireo fitaovana sy jiro tsy ampiasainao. Raha manohy mandrehitra jiro na fitaovana ianao nefa tsy mampiasa azy dia mazava ho azy fa ho very angovo io. Raha tokony hampiasa mari-panafarana rivotra ianao, maninona raha manandrana manokatra varavarankely hahafahan'ny rivotra malefaka miditra? Afaka mandeha lavitra amin'ny resaka fiarovana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana vokatr'izany. Farany, soloina jiro manjelanjelatra ny jiro manjelatra, satria mamokatra mitovy izy ireo raha tsy misy famirapiratana lehibe kokoa nefa mitaky angovo kely kokoa ary mamokatra hafanana kely kokoa.
Avereno amidy sy / na manome zavatra
Isaky ny manana zavatra tsy ilainao intsony ianao, fa tsy manary azy ireo fotsiny amin'ny faran'ny satroka, dia azonao atao ny mivarotra azy ireo na manome ho an'ny olon-kafa mila azy. Ny fivarotana entana izay tsy ilainao dia manana tombony roa sosona; Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fanitarana ny androm-piainan'ny vokatra iray ianao, fa mahazo tosika ara-bola amin'ny fivarotana an'io vokatra manokana io. Na izany aza, raha mahatsapa fiantrana bebe kokoa ianao, dia mandeha tsara ihany koa ny fanomezana zavatra tsy ilaina. Diniho ny fanomezana akanjo, kilalao na fitaovana tsy ilaina amin'ny fikambanana mpanao asa soa eo an-toerana sy / na iraisam-pirenena izay hizara izany ho an'ireo mila fanampiana. Amin'ny fanitarana ny androm-piainan'ny vokatra iray dia manampy amin'ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ny vokatra azo ampiasaina ianao na tokana izay miafara amin'ny fanariam-pako.
Mampiasà entana plastika tsy azo ovaina intsony
Talohan'ny fipoahan'ny plastika dia tsy nofinofisin'ny olona ny zavatra toy ny hareza tokana, kojakoja fanary sy fitoeran-tsakafo azo ampiasaina ary kitapo plastika. Ankehitriny, azo antoka fa afaka mahita kinova plastika amin'ny entana ianao ary manary azy avy hatrany aorian'ny fampiasana azy. Ny olana ara-pahasalamana maro ankehitriny izay mipoitra avy amin'ny fikarakarantsika ny tontolo iainana dia avy amin'ny poizina nateraka ho amin'ny natiora tamin'ny alàlan'ny fako. Na ny fako nariana sy notsaboina tsara aza, toy ny any amin'ny fanariam-pako, dia mbola afaka mamoaka poizina amin'ny tontolo iainana. Ka raha tokony hampiasa zavatra plastika azo atsipy ianao, maninona raha mampiasa zavatra azo ovaina na azo ampiasaina avy amin'ny akora voajanahary, toy ireo vita amin'ny volotsangana avy amin'ny katalaoginay?
Aza miankina amin'ny fiaranao
Ny fiara dia iray amin'ireo endrika fitaterana mety indrindra, kanefa raha mitondra azy irery ianao dia handray anjara amin'ny 4.6 metric taonina taonina CO2 avoaka amin'ny atmosfera isan-taona avy amin'ny fitaterana fiara. Izy io no mandrafitra ny ankamaroan'ny entona entona entona isan-taona, izay no tena mahatonga ny fiakaran'ny tany. Azonao atao ny mampihena ny dian-tongotrao amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka toy ny bus bus sy / na ny metro. Raha tsy izany, azonao atao ny mandeha an-tongotra na mandeha bisikileta. Tsy vitan'ny hoe tsy hanafaka ny fandefasana entona mandeha amin'ny bisikileta na bisikileta ianao, fa ho salama kokoa koa noho ny fanatanjahan-tena amin'ny mandeha na bisikileta.
Hendre amin'ny rano
Mety ho toa sosokevitra maivana izany, saingy tsy midika izany fa tokony tsy hiraharaha izy. Rehefa dinihina tokoa, maro ny faritra eto amin'izao tontolo izao no miaina haintany masiaka, ary ny angovo sy ny fanafanana rano dia mitaky angovo. Afaka manomboka amin'ny fanafohezana ny fotoana fandroanao ianao; tsy mila maka 15 minitra vao manadio tena. Ny fandroana 5 minitra dia fotoana mety hanadio sy hamelombelona anao. Azonao atao ihany koa ny mamono ny paompy raha miborosy nify na manasa lovia ianao. Vahaolana tsotra nefa mahagaga amin'ny fitahirizana rano. Ary farany, isaky ny manasa lamba ianao, manangona fitafiana maloto ary sasao amin'ny masininao ny entana feno, satria kely kokoa ny rano sy angovo ampiasainy mihoatra ny antsasaky ny enta-mavesatra 2.
Ankehitriny rehefa fantatrao izay azonao atao hanarahana fomba fiaina maharitra kokoa, afaka manomboka mampihena ny dian-tongotrao ianao ary amin'izany, afaka mandray anjara amin'ny ezaka lehibe kokoa ianao amin'ny fitehirizana ny tontolo iainana.